“ဘုရားသခင်သည် တရုတ်နိုင်ငံကိုကောင်းကြီးပေးပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံကို တရားစီရင်တော်မူသည်” | Real Conversion
“ဘုရားသခင်သည် တရုတ်နိုင်ငံကိုကောင်းကြီးပေးပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံကို တရားစီရင်တော်မူသည်”
‌ဒေါက်တာ အာရ်အယ်လ်ဟိုင်မာ ဂျေအာရ်
၂၀၁၁ ခုနှစ် ၊ စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊ တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၊ သခင်ဘုရားနေ့ ညနေပိုင်းဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ ဟောကြားသောဒေသနာတော်၊
“ကောင်းကင်ဘုံမှပေးတော်မမူလျှင်၊ လူသည် အဘယ်အရာကိုမျှ မခံနိုင်ရာ” (ယောဟန် ၃း၂၇).
ဒေးဗစ်အိက်ခ်မန်းသည် ပေကျင်း တိုင်းမ် မဂ္ဂဇင်းအစိုးရဌာနက အကြီးအကဲ၊ စာရေးဆရာ၊ ဂျာနယ် လစ်(သတင်းထောက်)နှင့် နိုင်ငံခြားရေးရာ အတိုင်ပင်ခံတစ်ဦး ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသူသည် တရုတ်ပြည်သူ သမ္မတနိုင်ငံနှင့်ပါတ်သက်၍ နိုင်ငံပေါင်းငါးဆယ်ထက်မနည်းသောနိုင်ငံများဆီသို့ သတင်းအချက်အလက် များကို စီရင်ခံတင်ပြခဲ့သည်မှာ ဆယ်စုနှစ်နှစ်နှစ်ကျော်ခန့် ကြိုးစားဆောင်ရွက်ခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။ အိက်ခ်မန်း က “ ယေရှုသခင်သည် ပေကျင်းမြို့တွင်ရှိသည် ။”ဟူသောခေါင်းစီးနှင့် စာအုပ်ကို ရေးသားခဲ့သူဖြစ် ပါ သည်။ (Regnery Publishing, Inc , 2003) ဤစာအုပ်က ခရစ်ယာန်ဘာသာသည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတ နိုင်ငံအား တိုးတက်ပြောင်းလဲစေပြီး ၊ကမ္ဘာ့ရင်ဘောင်တန်း ပြောင်းလဲခြင်းအရှိန်အဟုန်ကို မြင့်မားတိုးတက် စေပါသည်ဟု ရေးသားဖေါ်ပြထားပါသည်။ ပထမခေါင်းစီးအနေဖြင့် “ယေရှုသခင်သည် ပေကျင်းမြို့သို့ ကြွလာသည်” ဟူသောခေါင်းစဉ်ဖြင့် ရေးသားဖေါ်ပြခဲ့သည်။ အိက်ခ်မန်းက ပေကျင်းမြို့၌ရSdaom China’s main research institute ၊ တရုတ်နိုင်ငံ အမျိုးသားသုတေသန ဖွံ့ဖြိုးရေးသိပ္ပံနှင့် The Chinese Academy of Social Sciences ၊ တရုတ်အမျိုးသားသိပ္ပံကျောင်းတော်ကြီးမှ ပညာရှင်တစ်ဦး၏ ရေးသားချက်များကို ကိုးကား ဖော်ပြ ရေးသားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤတွင် ကွန်မြူနစ်ဝါဒ တရုတ်လူမျိုးပညာရှင် က ၂၀၀၂ ခုနှစ် အမေရိကန်နိုင်ငံသား ကမ္ဘာ့လှည့်ခရီးသွားများအား ပြောပြခြင်းသည် အံ့အားသင့် စရာပင်၊ ၎င်းပြောကြား ချက်ထဲတွင် အသိပညာရှင် အတတ်ပညာရှင်များက ကွန်မြူနစ်ဝါဒလွှမ်းမိုးသော တရုတ်နိုင်ငံတွင် ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်များတို့အား တံခါးဖွင့်ပြောကြားသည်ကို အောက်ပါအတိုင်း တွေ့မြင်ရပါသည်။ ထိုပညာရှင်ကြီး ပြောကြားရာတွင်၊
“ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကျော်ကြား၍လေးစားရလောက်အောင် အောင်မြင်နေသော အခြေ အနေတစ်ရပ်ကို အဖက်ဖက်က စဉ်းစားသုံးသပ်မိကြ၏။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သမိုင်း ကြောင်းကိုလေ့လာပြီး ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေး သမိုင်းကြောင်းနှင့် စီးပွားရေးသမိုင်း ကြောင်း၊ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာသမိုင်းကြောင်းအားလုံး လေ့လာသင့်သလောက် လေ့ လာပြီးဖြစ်ပါသည်။ ဦးစွာ သင်တို့(အမေရိကန်)၏ လက်နက်အင်အား တောင့်တင်း ခိုင်မာမှုကလည်း ကျွန်ုပ်တို့ထက် အလွန်သာနေပေသည်။ ပြီးနောက် သင်တို့၏ နိုင်ငံရေးနည်းဗျူဟာသည်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ထက် သာလွန်နေပေသည်။ နောက်ပြီး သင်တို့၏စီးပွားရေးခိုင်မာတောင့်တင်းမှုသည်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ထက် သာလွန်နေ သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်ဆယ်ကတည်းက သင်တို့၏ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ နှလုံးသား အခြေခံသည် (ခရစ်ယာန်)ဘာသာဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာကို အခြေခံနေသည်။ ထို့ကြောင့် အနောက်နိုင်ငံသည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ခရစ်ယာန် ဘာသာဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်ကိုအခြေခံ ထားကြသောကြောင့် အရင်းရှင်စနစ်မှ ဒီမိုကရေ စီစနစ် နိုင်ငံရေးအသွင်ပြောင်းလဲနေသည်ကို အထင်အရှား တွေ့ရပါသည်။ (David Aikman ) Jesus in Beijing, Regnery, 2003, P.5 ) ၌ ဖော်ပြထားသော အကြောင်းအရာအားလုံးအပေါ် ဘာဆိုဘာမှ သံသယပွားစရာ မလိုပေ” ဟူ၏။
“သင်တို့ အမေရိကန်၏ ယဉ်ကျေးမှုဆိုရာ နှလုံးသားအခြေခံသည် ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားကို အခြေ ခံခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါ့ကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်ဝယ် အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ စိုးစိမျှ သံသယ ပွားစရာပင်မရှိပါ” ထိုကောက်နုတ်ချက်သည် တရုတ်အမျိုးသား လူမှုရေးသိပ္ပံကျောင်းတော်က ပညာရှင် တစ်ဦးထံမှ စုစည်းတင်ပြချက်ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်နိုင်တက္ကသိုလ် (a liberal college Professor) ကလည်း ခရစ်ယာန်ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းသောကြောင့် ယနေ့ အမေရိကန်နိုင်ငံသည် အဖက်ဖက်မှ အောင်မြင်နေသည်ဟူသောအဆိုကို သဘောတူ အတည်ပြုပါသည်။ အမေရိကန် လောကီ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခများအတွက်တော့ ရယ်ချင်စရာကောင်းပေမည်။ ကွန်မြူနစ်ဝါဒ လွှမ်းမိုးသော တရုတ် ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံရေးသုတေသီတို့ အထင်အရှားမြင်တွေ့ရသော ခရစ်ယာန် ဘာသာသည်သာလျှင် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကို တိုးတက်ပြောင်းလဲစေသည်ဟူသောအမြင်ကို အမေရိကန်ပညာရှင်များ မတွေ့မြင်ကြပေ။
ထိုအကြောင်းကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တရုတ်ပညာရှင်များ ပြောကြားခဲ့သည်မှာ လွန်ခဲ့သော (၁၂)နှစ် ကတည်းက စတင်ပြီး မတော်တဆထိခိုက်နစ်နာမှုများ တစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပြီး နိုင်ငံစီးပွားရေး သည်လည်း ကြီးမားသောထိုကျဆင်းမှု ကြုံခဲ့ရပါသည်။ သောင်းနှီချီ၍ အမေရိကန်ပြည်သူများ အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်ရကြပါသည်။ ဤအချိန်တွင် အမေရိကန်ပြည်သူများ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ရကြပါသည်။ ဤအချိန်တွင် အမေရိကန်ပြည်သူ^သားများက များမကြာမှီနှစ်များတွင် တရုတ်နိုင်ငံသည် အမေရိကန်ထက် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာတော့မည်ကို သိရှိလာကြပါပြီ။ အဘယ်ကြောင့်နည်း၊ နိုင်ငံတော်ကြီးတစ်စစီ တစ်စဆီ ဆုတ်ယုတ်ပြိုလဲရခြင်း၏အကြောင်းရင်းက မည်သည့်အရာနည်း ၊ အဖြေမှာရိုးရှင်းလှပါသည်။ တရုတ်နိုင်ငံသို့ ခရစ်တော်သခင်ထံသို့ ဦးလှည့်လာကြပြီး၊ အမေရိကန်နိုင်ငံသည် နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးများထံ သို့ ပြောင်းလဲဦးလှည့်နေသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
“ကောင်းကင်ဘုံမှပေးတော်မမူလျှင်၊ လူသည် အဘယ်အရာကိုမျှ မခံနိုင်ရာ” (ယောဟန် ၃း၂၇)
တစ်နာရီလျှင် လူပေါင်း ၁၂၀၀ခန့်သောသူတို့သည် ခရစ်ယာန်ဖြစ်လာကြသည်ဟု အမျိုးမျိုးသော ပြောစကားအရ ကြားနေရပါသည်။ တစ်နေ့လျှင် လူပေါင်း (၃၀၀၀၀)ခန့် ပြောင်းလဲကြပြီး တစ်နှစ်လျှ လူပေါင်း (၁၀)သန်းခန့် ခရစ်ယာန်များဖြစ်လာကြသည်။ ယခု ကျွန်ုပ်ဤတရားဒေသနာတော် ဟောကြား စဉ်ပင် တရုတ်နိုင်ငံ၌ လူပေါင်းသန်း(၁၀၀)ကျော်သည် ခရစ်ယာန်များဖြစ်နေကြပေမည်။ နာရီတိုင်း၌ တစ်ထောင်ကျော်တိုးပွားလာကြပြီး တစ်နေ့လျှင် (၂၄)နာရီရှိနေပါသည်မဟုတ်လား။ ဤအချိန် ကမ္ဘာအနှံ့ အပြား ဝိညာဉ်ရေးရာနိုးထမှုဖြစ်သော အချိန်ကာလပင်ဖြစ်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူများ တိုးပွားသောနိုင်ငံတစ်ခုအနေနှင့် ရပ်တည်နေပြီး ကျွန်ုပ်တို့ အမေရိကနှင့် အနောက်နိုင်ငံများသည် ကျဆုံးချိန်နှင့် ကြုံရသည်မှာ အဘယ်ကြောင့်နည်း၊ အဖြေ သည် ရိုးရှင်းစွာထပ်မံ၍ တွေ့ရပါမည်။
အမေရိကန်နှင့် အနောက်နိုင်ငံတို့၌ ခရစ်ယာန်အသက်တာ တစ်စစီတစ်စစီ ပျက်စီးနေကြသည်။ လူမှုရေးအရှုပ်အထွေး၊ စာရိတ္တပျက်ပြားခြင်းနှင့် ဝိညာဉ်ရေးရာ ရှုပ်ထွေးမှုများ ရှိလာပါသည်။ အခုလို ဖြစ်ရ ခြင်း၏ အကြောင်းရင်းမှာ သမ္မာကျမ်းစာတော်ကို လျစ်လျူရှုထားကြပြီး၊ ၎င်းကျမ်းစာကို တိုက်ခိုက်နေ သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထိုထိုးနက်ချက်တွေက ကျွန်ုပ်တို့ မိသားစုများ ပျက်စီးခြင်းခံကြရသည်။ လူငယ် လူရွယ်များဟာ အထီးကျန်ဆန်ရကြပြီး မိသားစုများ ကျိုးကြေသွားကြရ၏။ ထိုကဲ့သို့ဖြစ်ရခြင်းသည် ခရစ်ယာန်အသက်တာ လက်တွေ့ကျင့်သုံးမှု မရှိတော့၍ ဖြစ်ပါသည်။ အမေရိကန်ရှိလူငယ်များ မိသားစုနှင့် အဆက်ပြန်တောက်ရကြပြီး လမ်းပေါ် လှည့်လည်သွားလာနေရကြသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းသည် လောကီ ပညာရေးကောလိပ်ပါမောက္ခများက ခရစ်ယာန်ဘာသာကို တိုက်ခိုက်နေကြ၍ဖြစ်သည်။ ထိုတိုက်ခိုက်မှုက နိုင်ငံတော်ကို တစ်စစီဖြိုခွဲစေသည်။ ၎င်းအကြောင်းကိစ္စတစ်ခုတည်းကို ကယ်တင်ဖြေရှင်းဖို့ လိုနေပါပြီ။
အမေရိကန်နိုင်ငံ၌ ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်တိုင်း ဒုက္ခပေါင်းများစွာနှင့် ရင်ဆိုင်နေရကြပါပြီ။ (၁၉၅၀)ခုနှစ် ကျွန်ုfပ်လူငယ်လေးအရွယ် နောက်ကြောင်းကိုပြန်ကြည့်ပါက နှစ်ခြင်းအသင်းတော်တိုင်း တနင်္ဂနွေနေ့ညနေပိုင်း အစည်းအဝေးကို ပုံမှန်ပြုလုပ်လေ့ရှိပါသည်။ အခုဆိုလျှင် တနင်္ဂနွေညနေပိုင်းဝတ်ပြု အစည်းအဝေးပြုလုပ်သော (Fundamentalist) သမ္မာကျမ်းစာပါအချက်အလက်အတိုင်း ပြုကျင့်ဆောင်ရွက် သူများတို့ကို တွေ့ခဲလှပေပြီ။ အမေရိကန်နိုင်ငံ၌ ရှေ့ကျသော (Fundamental) ကျောင်းတော် အမှုတော် ဆောင်တဦးဆီသို့ အမျိုးသမီးငယ်က ဖန်းဖြင့်မေးမြန်းခဲ့သည်။ အမှန်တကယ် တနင်္ဂနွေနေ့ ညနေပိုင်းဝတ်ပြု အစည်းအဝေးအမြဲရှိသော (Fundamental) အသင်းကို သိချင်၍ဖြစ်သည်။ အသင်းတော်ပေါင်း ရာနှင့်ချီပြီး လူဦးရေပေါင်း သန်းနှင့်ချီ၍ရှိသော မြို့၌တနင်္ဂနွေနေ့ညနေပိုင်း ဝတ်ပြုအစည်းအဝေးပြုသော ဘုရားကျောင်း ဟူ၍ မရှိပါဟု ထိုအမှုတော်ဆောင်က မိန်းကလေးအား ပြောလိုက်၏။
တနင်္ဂနွေညနေပိုင်းဝတ်ပြုအစည်းအဝေးကို မပြုသည်သာမကပဲ၊ မှန်ကန်စွာဆုတောင်းခြင်း အစည်း အဝေးလည်း ပြုသူတို့လည်း ရှားပါသလောက် မတွေ့ရတော့ပေပြီ။ သူတို့တွင် (Awana,) ရှိကောင်းရှိပေမည်။ အသင်းတော်ဓမ္မသံစုံများ သီဆိုကောင်းသီဆိုကြပေမည်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ည ကျမ်းစာလေ့လာခြင်း အစီအစဉ်များ ရှိကောင်းရှိပေမည်။ စစ်မှန်သောဆုတောင်းအစည်းအဝေးသည် အတိတ်၌ နောက်ကျကျန်ရစ်ပြီဖြစ်သော ပစ္စည်းဥစ္စာကဲ့သို့ ယနေ့အသင်းတော်၌ ထိုကဲ့သို့ ဖြစ်နေပေပြီ။
ဧဝံဂေလိလုပ်ငန်း အခြေအနေကော အဘယ်သို့နည်း၊ မယုံကြည်သူများအား ထိထိရောက်ရောက် ဧဝံဂေလိလုပ်ငန်းစဉ် ဆောင်ရွက်သော အသင်းတော်မည်မျှရှိသနည်း၊ အလွန်နည်းပါးပါသည်။ ဒေါက်တာ ဂျိမ်းဒေါဆန်ပြောကြားသကဲ့သို့ “ပြောင်ရွှေ့သောအသင်းသူ^သားများသာ အသင်းတော်၌တိုးပွားလာသည်။” ဟူ၍ ပြောခဲ့သည်။ (Focus on the family newsletter, August 1998, P.2). တနည်းအားဖြင့် အိုပြီးသော အသင်းသား^သူများကို ခိုးယူသောအသင်းတော်များသာ တိုးပွားကြသည်။ မည်ကဲ့သို့ ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များကို အသစ်တဖန်ပြောင်းလဲအောင် မည်ကဲ့သို့ကြိုးစားဆောင်ရွက်ရမည်ကို မသိနား မလည်ကြချေ။
ထို့ကြောင့် တကယ်အရေးကြီးသော ဧဝံဂေလိလုပ်ငန်းဆောင်တာများကို အမေရိကန်ရှိ အသင်းတော်များ မေ့မျော့နေကြပေပြီ။ “သမ္မာကျမ်းစာသို့ ပြန်လည်သွားကြပါစို့” ဟုပြောကြားခဲ့သော ဒေါက်တာဝုဒ်ဂိုးခရိုက ပြောကြားသည်မှာ “သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်၏ ခေါင်းစဉ်သည် ''The vanishing ministry'' သာသနာတော်ကွယ်ပျောက်ဖို့ရန် မဟုတ်ပဲ ၎င်းသည် ဝမ်းနည်းဖွယ်အမှားတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ (Woodrow kroll, Th.D. The Vanishing ministry, kregel publication, 1991, P.10)
ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းအောင် အမေရိကန်ရှိအသင်းတော်များ ဝိညာဉ်ရေးရာခြောက်သွေ့နေပြီး ထင်ထင် ရှားရှား ပျောက်ကွယ်လုမတတ်ဖြစ်နေပေပြီ။ ဘာကြောင့် ထိုကဲ့သို့ ဖြစ်ရသနည်း၊ ဘုရားသခင်သည် အမေရိ ကန်နိုင်ငံကို တရားစီရင်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် ခရစ်တော်သခင်ထံသို့ ဦးလှည့်လာပြီး၊ အမေရိကန်နိုင်ငံသည် ခရစ်တော်သခင်ထံမှ အဝေးသို့ဖယ်ရှောင်နေပေပြီ။ (neo-Paganism) မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလွှမ်းမိုးသော အမှောင်ထုခေတ် ယနေ့ အမေရိကန်နိုင်ငံ၌ ကျရောက်နေပေပြီ။ လူငယ်များခင်ဗျား သင်တို့၏အနာဂါတ်မျှော်လင့်စရာအဖို့ တရုတ် ပြည်သို့ သွားရောက်ရှာဖွေစရာမလိုပါ။ ဤအမေရိကန်နိုင်ငံ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၌ပင် ခရစ်တော်သခင် ကို သင်တို့တွေ့ဆုံနိုင်ပါသည်။ ဘုရားရှင်၏ ကျေးဇူးကရုဏာတော်သည် သင့်အပေါ်သို့ သက်ရောက် တည်ရှိမည်ဆိုပါက “အဘယ်ကြောင့် အထီးကျန်ဆန်နေရမှာလဲ” ဒါကြောင့် ကျွန်ုပ်ပြောနေတာပေါ့ဗျာ၊ သင့်မိတ်ဆွေများရှိရာ အလင်းတော်သို့သာ ကြွလှမ်းခဲ့ပါ။ အဘယ်ကြောင့် အပျောက်ခံနေရမည်နည်း၊ ဘုရားသခင်၏သားတော်ရှိရာ အသင်းတော်သို့ ကြွလှမ်းခဲ့စမ်းပါ။ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့ အသင်းတော်၌ လည်း ခရစ်တော်ဘုရားကို သင်တွေ့ဆုံနိုင်ပါတယ်။ သန်းပေါင်းချီပြီး ဘုရားရှင်ထံက အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်း ခံနေ၍ ဘုရားရှင်ထံပါးက ဆုကျေးဇူးခံစားနေရကြသော တရုတ်လူမျိုးများကဲ့သို့ သင်လည်း ဤအသင်း တော်၌ တွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါတယ်။ တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်သို့ ကြွလှမ်းလာပြီး ယေရှုဘုရားနှင့် ဆုံတွေ့ လိုက်ပါ။
အနည်းငယ်သောသူတို့ကသာလျှင် ဤတရားဒေသနာတော်ကို စိတ်ဝင်စား နားထောင်ကြ ပေမည်။ သင်တို့ နားမထောင်ဖို့လိုသောအကြောင်းက ရှင်းနေတာပဲမဟုတ်လား။ နုတ်ကပတ်တော် မိန့်တော် မူသည်မှာ၊
ယေရုဆလင်မြို့၌ နိကောဒင်နှင့် စကားအချေအတင်ပြောဆိုပြီးနောက် ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့ သည် ကျေးလက်ဒေသသို့ လှည့်လည်ကြသည်။ ယေရှုသည် နောင်တနှင့်ဆိုင်သော ဧဝံဂေလိတရားကိုဟော ကြားပြီး သူတပည့်တော်များက နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာကိုပေးကြသည်။ ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်သည်လည်း မလှမ်းမကမ်း၌ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာကို ပေးလျှက်နေပါသည်။ ယေရှုနောက်လိုက်တပည့်တော်များက နှစ်ခြင်းဆရာယောဟန် နှစ်ခြင်းပေးသည်ထက်သာလွန်၍ များပြားနေသောကြောင့် စကားအချေအတင် ငြင်းခုံမှုရှိခဲ့သည်။ ယေရှု ၏တပည့်တော်များက များစွာသောလူတို့အား နှစ်ခြင်းပေးနေသည်ကို ယောဟန်၏ တပည့်တော်တို့အဖို့ ဆိုးရွားစွာသောခံစားမှု ဖြစ်စေခဲ့သည်။ သမ္မာကျမ်းစာတော်၌ ယောဟန်က နောက်လိုက်တပည့်တော်တို့အား ယေရှုဘုရား၏ အောင်မြင်ခြင်းကို စောဒကတက်စရာမလိုဟု သတိပေးပြောကြားခဲ့သည်။ လူတိုင်းအဖို့ ထူးခြားသောဆုကျေးဇူးအသီးသီး ပေးထားပါသည်။
ကောင်းကင်ဘုံသည် ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခြင်းသည်(ဝါ) ဘုရားသခင်ထံမှ လာသည်။ (John Begel , New Testament Commentary , Kregel, 1981 reprint valume I, p.577).
“ဝိညာဉ်တော်နှင့် ပြည့်၀သောအသက်တာသည် ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်အပေါ်အခြေခံပြီး မပြောင်းမလဲ လိုက်လျှောက်ခြင်းသည် ယေဘုယျအမှန်တရား(ဝါ) သမ္မတရားနည်းလမ်းပင်ဖြစ်သည်။”ဟူ၍ မက်သရူးဟန်နနီက ကောက်နုတ်ထားပါသည်။ (matthew Henry, Commentary on the whole Bible , Hendrickson, 1991, reprint volume 5, p 720)
ဤÞယေဘုယျအမှန်တရားသည် သစ်သောအသက်တာပြောင်းလဲရေးအတွက် အကျွန်ုပ်အသုံးပြု နေပါသည်။ ဤရှင်းလင်းချက်များက တရုတ်လူမျိုးအများအပြားတို့အား ခရစ်တော်ဘုရားသခင်ထံ ဦးလှည့် လာဖို့ရန် အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ အမေရိကန်မူကား ဝိညာဉ်အမှောင်ထုထဲအောက် ထိုးကျနေပြီ ဖြစ်သည်။
စစ်မှန်သောအသက်တာပြောင်းလဲခြင်းဟူသည် “စွမ်းအား”အပေါ်၌ မူတည်နေခြင်းမဟုတ်ပါ။ multi-media presentation ၊ သတင်းစုံတင်ဆက်နေခြင်း၊ purpose-driven church growth gimmicks, အသင်းတော်တိုးတက်ရေးစာအုပ်လမ်းညွှန်များသည် လူကိုလှည့်စားသောအရာများသာ ဖြစ် သည်။ ယနေ့ အမေရိကန်နိုင်ငံသည် ထိုသို့သော တန်ဆာပလာများကို အသုံးပြုဖို့ရည်ရွယ်နေပြီ။ ထိုအရာ များသုံးခြင်းဖြင့် တစ်ပါးသူတို့အား ပြောင်းလဲစေနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ တရုတ်နိုင်ငံတွင် မိသားစု အသင်းတော် ဖြစ်ပါစေ၊ ဟောင်းနွမ်းနေပြီဖြစ်သော ဓမ္မသီးသံစဉ်များနှင့် ဟောင်းနွမ်းဆုတဲ်ပြတ်နေပြီးဖြစ်သော သမ္မာကျမ်းစာများကို သာ အသုံးပြုနေရပါသော်လည်း တစ်နာရီအတွင်း လူပေါင်း (၁၂၀၀)ခန့် တရုတ်နိုင်ငံတွင် အသက်တာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲနေကြပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်ကြားသိရသည်မှာ ဘုရားမဲ့ဝါဒ ပျောက်ကွယ်သွားသည်အထိ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ကြဖို့ မျှော်လင့်နေကြပါသည်ဟု အမေရိကန်လူအချို့တို့ ပြောသံကို ကြားရပါသည်။ ဒါကြောင့် အချို့သောအမေရိကန်ု ခရစ်ယာန်တို့က တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်ပြီး “သင်ကြား” ပေးကြသည်။ သို့သော်လည်း ထိုကဲ့သို့ မဟုတ်ပဲ ပြောင်းပြန်ဖြစ်စေဖို့ ကျွန်ုပ် ဆုတောင်းနေပါသည်။ ဘုရားရှင်က အမေရိကန်ဆရာတို့ တရုတ်နိုင်ငံခရီးသွားကြဖို့ တားဆီးရန် ကျွန်ုပ်ဆုတောင်းနေပါသည်။ ထိုသူတို့ကို သင်ကြားပေးဖို့ ကျွန်ုပ်တို့မလိုအပ်ပါ။ သူတို့က တကယ်လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုအပ်တာပါ။ အမှန်တကယ်ပါပဲ ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ဆောင်ဖို့ မလိုအပ်ပါ။
ဖြူရီတမ်ကျမ်းအနက်ဖွင့်ဆရာကြီး ဂျွန်ထရက်ပ်ပြောကြားသည်မှာ “လူသည် အဘယ်အရာကိုမျှ မခံနိုင်ပါ။ လူ၌ စိတ်ဆင်းရဲ၊ ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းက သူ့သဘာ၀အတိုင်း ဖြစ်လာသည်ဟု စောစောကထင်ထား သကဲ့သို့ ကျမ်းစကားများ၌လည်း မြောက်များစွာဖေါ်ပြထားပါသည်။
(John Trapp , A commentary on the old and new Testament , Transki publications, 1997, reprint, volume 5, p.353)
''A man" ဟူသည် တစ်ဦးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်က ကယ်တင်ခြင်းကို သူ့အား မပေးအပ် ခဲ့ဘူးဆိုပါက မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှ မရရှိနိုင်ပါ။ “သူသည် အဘယ်အရာမျှ မခံနိုင်ရာ” ကယ်တင် ခြင်းကိုပင် ကောင်းကင်ဘုံမှပေးတော်မမူလျှင် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ မခံနိုင်ရာ “အဘယ်ကြောင့် ထိုကဲ့သို့ ဖြစ်သနည်း၊
၁။	ပထမ၊ ကယ်တင်ခြင်းသို့ မရောက်စေခြင်းငှါ မာရ်နတ်သည် သင့်နှလုံးသားထဲက တရား စကားကို နုတ်ယူသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၌ ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူတို့က မာရ်နတ်နှင့် အပေါင်းအပါးများကို အမြဲသတိထားကြပြီး အမေရိကန်ရှိ ခရစ်ယာန်များမူကား သတိမထားလုနီးပါးဖြစ်ကြ၏။ ဘယ်တော့မှ မိမိရန်သူအကြောင်းကို မစဉ်းစားမိခြင်းက အောင်မြင်ကြီးရှိပေမည်။
အကယ်၍ ကယ်တင်ခြင်းခံလိုပါက၊ အောက်ပါအချက်ကို သိရပါမည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၊ မာရ်နတ်အပေါင်းအပါ က တန်ခိုးကြီးမားနေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ယေရှုဘုရား မိန့်တော်မူသည်မှာ၊
“လမ်း၌ကျသောမျိုးစေ့ကား၊ တရားစကားကို ကြားသည်ရှိသော် ယုံကြည်ခြင်း ကယ်တင်ခြင်းသို့ မရောက်စေခြင်းငှါ မာရ်နတ်သည် လာ၍ တရားစကားကို နှလုံးထဲမှ နုတ်ယူသောသူကို ဆိုလိုသတည်း” (ရှင်လုကာ ၈း၁၂)။
ဤသည် ရယ်စရာမဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည် မပြောင်းလဲသေးသောသူဖြစ်မည်ဆိုပါက ဤတရားစကားကို ဂရုစိုက်ကြည့်ပါ။ သင်သည် တရားဒေသနာတော်ကို အခေါက်တစ်ရာမက ကြားရပါစေ၊ သင့်အသက်တာ မပြောင်းလဲပဲနေပေမည်။ အကြောင်းမှာ မာရ်နတ်က “တရားစကားကို သင့်နှလုံးထဲက နုတ်ယူသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။” ရှင်လုကာ ၈း၁၂ ၌ မိန့်တော်မူသည်မှာ မာရ်နတ်၌ ထိုကဲ့သို့ လုပ်ဆောင် နိုင်သောတန်ခိုးရှိသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ တနေ့သောတနင်္ဂနွေနေ့ အရေးကြီးသော တရားဒေသနာ အပြီးတွင် သားအဖနှစ်ယောက်အား ဝေခွဲမရဖြစ်နေသောအကြောင်းအရာအတွက် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ဖြစ်သည်။ ဝိညာဉ်ရေးငရဲ ကျရောက်မည့်အကြောင်းနှင့် ဝေခွဲမရဖြစ်နေဆဲပင်၊ အချိန်ကြာကြာ ဆွေးနွေးတိုင်ပင် ပြီးနောက် ထိုသားအဖနှစ်ဦးသည် သေစေလောက်သောအမှားကို ထပ်၍ပြစ်မှုကျူးလွန်ကြ၏။ သေချာ သည်မှာ ထိုသူတို့သည် ထိုအကြောင်းအရာအပေါ် စိတ်ပင်မထားပဲ ငိုက်မျဉ်းနေသောကြောင့် ဖြစ်မည်။ အကြောင်းမှာ မာရ်နတ်က သူတို့နှလုံးသားထဲက တရားစကားကို ချင်ချင်းနုတ်ယူသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် ပထမအကြောင်းတရားဖြစ်သည်။
“ကောင်းကင်ဘုံမှ ပေးတော်မမူလျှင် လူသည် အဘယ်အမှုကိုမျှ မခံနိုင်ရာ (ယောဟန် ၃း၂၇)။
မာရန်နတ်သည် တရားစကားကို သင်၏နှလုံးထဲကနုတ်ယူဖို့ရန် တန်ခိုးကြီးမားသောသူဖြစ်သည်။ “တရားစကားကို ကြားသည်ရှိသော် ယုံကြည်ခြင်း၊ ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်သည်”ဟု (လုကာ ၈း၁၂)၌ ဖေါ်ပြသည်။ ဘုရားသခင်၏ ရွေးနုတ်ခြင်းကျေးဇူးကသာလျှင် မာရ်နတ်၏ဥာဏ်နီဥာဏ်နက်အပေါ် တန်ခိုး ဖုံးလွှမ်းနိုင်သည်။ လူသားဝိညာဉ်ကို ကယ်တင်နိုင်သည်။
“ကောင်းကင်ဘုံမှပေးတော်မမူလျှင် လူသည် အဘယ်အမှုကိုမျှ မခံနိုင်ရာ” (ယောဟန် ၃း၂၇)
“အံဩဖွယ်ကျေးဇူးတော်” ဓမ္မသီးချင်းကို သီဆိုသည်။
(၁၈၂၅ – ၁၈၀၇၊ ဂျွန်နယူတန် သီကုံးသော အံ့ဩဖွယ်ကျေးဇူးတော်)။
၂။	ဒုတိယ၊ သင်၏သေကြေပျက်စီးသွားသော အတွင်းနှလုံးသားက တရားစကားကို နုတ်ယူ သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကျေးဇူးတရားမရှိပဲ၊ သေကြေပျက်စီးသွားသော သင့်နှလုံးသားက တရားစကားကို ခိုင်ခိုင်မာမာ မဆုပ်ကိုင်နိုင်တော့သဖြင့် ခရစ်တော်ထံသို့ မချဉ်းကပ်နိုင်တော့ပေ။ ပုပ်သိုးနေသော လူသေလောင်းက လမ်း မလျှောက်နိုင်တော့ပါ။ နည်းတူ အပြစ်၌သေနေသော မိတ်ဆွေသည်လည်း ခရစ်တော်သခင်ထံ သင့်ကို သွားရောက်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ယောဟန် ၆း၄၄ ကို မတ်တပ်ရပ်လျှက် အသံကျယ်ကျယ် ဖတ်ကြားကြပါစို့။
“ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသော ခမည်းတော်သည် သွေးဆောင်တော် မမူလျှင် အဘယ်သူမျှ ငါ့ထံသို့ မလာနိုင်။ လာသောသူကို နောက်ဆုံးသောနေ့၌ ငါပြန်ရှင်စေမည်။ (ယောဟန် ၆း၄၄)
အားလုံးထိုင်နိုင်ကြပါပြီ။ “ခမည်းတော်သည် သွေးဆောင်တော်မမူလျှင် အဘယ်သူမျှ ငါ့ထံသို့ မလာ နိုင်” ဤကျမ်းက သိပ်ပြီးရိုးရှင်းလှပါသည်။ သင်သည် “ဒုစရိုက်အပြစ်၌ သေလျှက်ရှိသည် (ဧဖက် ၂း၅) ခေါင်းသလားထဲက လူသေအလောင်းက တရွေ့ရွေ့နှင့် ခရစ်တော်ဘုရားထံ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ဖို့ မစွမ်း နိုင်ပါ။
စပါဂျန်က မကြာခဏပြောကြားသကဲ့သို့ လူသည် သေကြေပျက်စီးနေသော မိမိ၏ဘ၀အဖြစ်မှန်ကို မသိပဲ အသစ်သောသတ္တဝါဖြစ်မလာနိုင်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ သင်သည် ပျောက်ဆုံးသောသူဖြစ်ကြောင့် သင့်ကိုသင် သိရပါမည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သင်၏ဆုတောင်းခြင်းက သင့်ကိုမစ၍မရဟူ၏။ သင်ကို သင်ကြား သမျှသည်လည်း သင့်ကိုကူညီမစမှု မပြုနိုင်ပါ။ သင့်ကိုသင် ကောင်းအောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ခြင်းဟူ၍လည်း မရှိနိုင်ပေ။ သင်သည် ပျောက်ဆုံးသောသူဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်၏။ အပြစ်၌ သေနေသူ ဖြစ်၍ဖြစ်သည်။ ခမည်းတော်က သွေးဆောင်တော်မမူလျှင် အဘယ်သူမျှ ငါ့ထံသို့မလာန်ိုင” အကယ်၍ ဘုရားရှင်က သင်၏လက်ရှိနေရာ၌ သင့်အား ဆက်ထားမည်ဆိုပါက သင်သည် ပျက်စီးခြင်းငရဲထဲ ကျပေ မည်။ သင့်ကိုသင့် ကယ်တင်၍မရပါ။ သင်၏ ထာ၀ရအသက်ရှင်ခြင်းကိုလည်း သင့်ကိုသင် မဖန်တီးနိုင်ပါ။
၃။	တတိယ၊ သင်၏သေကြေပျက်စီးသွားသော သင်နှလုံးသားက သင်သည် အပြစ်၌သေနေကြောင်း ကို မသိနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကို ဖယ်ရှောင်နေမည်ဆိုပါက သင်သည် ဘုရားသခင်ထံ မျက်မှောက် –တော်၌ အပြစ်ပြည့်နှက်နေသူဖြစ်ကြောင်း သိနားလည်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ သန့်ရှင်a;သာဝိညာဉ်တော်၏ တန်ခိုးတော်ကသာလျှင် မိမိ၏အပြစ်ကို မြင်နိုင်စွမ်းပြီး ၎င်းအပြစ်ကို မုန်းတီးစေခြင်းကို ထင်ရှားစွာ ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ယေရှုဘုရားက သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကသာလျှင် သင့်အပြစ်များကို ပဲ့ပြင်ဆံးမပြီး သင်သည် ပျောက်ဆုံးနေသောသူဟု ထင်ရှားစေမည်ဟူ၍ မိန့်ကြားခဲ့ပါသည်။
“ဥပဇ္ဈာယ်ဆရာသည် ရောက်လာလျှင် ဒုစရိုက်အပြစ်များကို၎င်း၊ အပြစ်တင်ခြင်းကိုလည်း လောကီ သားတို့အား ထင်ရှားစွာဖေါ်ပြမည်။ (ယော ၁၆း၈)
ဘုရားရှင်က သင်၏အပြစ်များ စတင်၍ထင်ရှားစဉ်တွင် သင်သည် သင့်အပြစ်များအကြောင်း စတင်၍ တွေးတောကလာပါလိမ့်မည်။ သင့်အပြစ်များကို ဘုရားသခင်က ထိထိရောက်ရောက် ဖေါ်ပြပါက သင်သည် အတွင်းနှလုံးသားထဲ၌ စတင်၍ အပြစ်သားဖြစ်မှန်း သိလာပါလိမ့်မည်။ ဤသည် သင်မပြောင်းလဲ သေးသော အကြောင်းရင်းတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ သင်သည် အပြစ်သားဖြစ်သည်ဟု ဖေါ်ထုတ်န်ိုင်ရန် သင်၌ လုံလောက်သော စွမ်းရည် မရှိပါ။ အကြောင်းမှာ အပြစ်၏စာရင်းသည် ဘုရားသခင်၌သာရှိသည်။ ထိုအပြစ်များက သင့်အား မီးငရဲသို့ ကျရောက်စေမည်ဖြစ်သည်။ သို့ပေမယ့် ဘုရားရှင်က သင်၏အပြစ်ကို ထင်ရှားစွာ မဖေါ်ပြပါက အပြစ်သည်သိပ်အရေးမကြီးပါဟု သင်တွေးတောထင်နေပေလိမ့်မည်။ သင့်ကိုသင် အပြစ်ကင်းရှင်းလာသည့် အထိ အပြစ်ကိုဆေးကြောဖို့ သင်မတတ်နိုင်ပါ။ ဘုရားရှင်တစ်ပါးကသာလျှင် သင်၏အပြစ်ကို ဖေါ်ပြပါမည်။
၄။	စတုတ္ထ၊ သင်၏သေကြေပျောက်ဆုံးသွားသော သင့်နှလုံးသားပကတိက ယေရှုခရစ်တော်ကို ငြင်းဆန်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ယေရှုသည် သခင်ဖြစ်ကြောင်း သင်၏သေကြေနေသော နှလုံးသားက ငြင်းဆန်နေသောကြောင့် သင့်ကိုသင် ကယ်တင်ယူ၍မရနိုင်ပါ။ ဓါတ်ဆီနှင့်ရေကိုရောပြီး အသုံးပြု၍မရသလိုပင်။ နှစ်မျိုးစလုံးက သီး ခြားဖြစ်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။နည်းတူ သေကြေနေသောသင့်နှလုံးသားနှင့် ယေရှုခရစ်တော်၌ပေါင်းစပ်၍ မရနိုင်ပါ။ မည်သည့်အရာပင် သင်ပြုစေကာမူ သင်၏သေကြေနေသောနှလုံးသားဖြင့် ယေရှုကို လက်ခံယူ၍ မရသလို “ပေါင်းစပ်၍” မရနိုင်ပါ။ အကြောင်းမှာ သေနေသောနှလုံးသားက ယေရှုနှင့်ကွဲကွာသော ကြောင့်ပင် ဖြစ်သည်။ မိမိ၏ဇာတိသဘောဖြင့် မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် ယေရှုကိုရှာဖွေ၍ မရနိုင်ပါ။
ကျေးဇူးပြု၍ ၁ကော ၂း၁၄ ကို အတူတကွ မတ်တပ်ရပ်လျက် အသံကျယ်ကျယ် ဖတ်ကြားကြပါစို့။
“ဇာတိပကတိလူသည် ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်အရာတို့ကို မခံယူ၊ ထိုအရာတို့သည် မိုက်မဲသော အရာဖြစ်သည်ဟု ထင်တတ်၏။ ထိုအရာတို့ကို ဝိညာဉ်တော် အားဖြင့်သာ ပိုင်းခြား၍ နားလည်နိုင်သော ကြောင့် ဇာတိပကတိလူသည် နားမလည်နိုင်။” (၁ကော ၂း၁၄)
“ဇာတိပကတိလူ” ၎င်းသည် သင်၏နဂိုနေရာပင်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ သဘာ၀လွန်တန်ခိုး တော်က သင့်အထဲသို့ မကိန်းဝပ်ပဲ၊ သင်၏နဂိုနေရာဖြင့် ယေရှုဘုရားနှင့် ကယ်တင်ခြင်းကို သင်မသိနိုင်ပေ။ သဘာ၀လွန်တန်ခိုးတော်က သင့်အထဲ၌ ကိန်းဝပ်တော်မူပြီး လုပ်ဆောင်မှသာလျှင် သင်သည် ယေရှုထဲသို့ တိုးဝင်းနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ အကယ်၍ ဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းမရှိပဲ ယေရှုသခင်ထံ သင်ချဉ်းကပ်နိုင်ရန် မဟုတ် ပေ။ သင်၏နဂိုနေရာနေရာ၌ ရှိနေခြင်းဖြင့် သင့်အပြစ်များကို အသွေးတော်အားဖြင့် ဆေးကြော သန့်စင် နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ယေရှုထံသို့ချဉ်းကပ်နိုင်ရန် ဘုရားသခင်ကသာလျှင် သင့်အား သွေးဆောင်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ သင့်ကိုသင် ကြိုးစားခြင်းအားဖြင့် ယေရှုဖြင့် တွေ့ဆုံနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အပြစ်၌သာ ရှိရမည်ဖြစ်၍ အပြစ်၏အဖိုးအခဖြစ်သော သေခြင်းငရဲ၌ ကျရောက်မည်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်က ပါဝင်ပါတ်သက်မှုမရှိ၊ သွေးဆောင်ခြင်းမရှိပါက သင်သည် ကယ်တင်ရှင်ယေရှုထံ ချဉ်းကပ်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
“ကောင်းကင်မှပေးတော်မမူလျှင်၊ လူသည်အဘယ်အရာကိုမျှ မခံနိုင်ရာ (ယော ၃း၂၅)
အို၊ သင့်အဖို့ ကျွန်ုပ်တို့သည် အားကြီးလျှက် ဆုတောင်းပေးနေပါသည်။ ယေရှုသခင်ထံ ချဉ်းကပ်ပြီး သင်၏အပြစ်များကို အသွေးတော်နှင့် ဆေးကြောသန့်စင်ဖို့ရန်ပေးပါသည်။ အာမင်။ “အံဩဖွယ်ကျေးဇူးတော်” ဓမ္မသီးချင်းကို သီဆိုသည်။
တရားဒေသနာတော်မတိုင်ခင် ဒေါက်တာခရိတ်တန်အယ်လ်ချန်မှ ရှင်ယောဟန် ၃း ၂၂-၃၀ ကို ဖတ်ကြားပေးသည်။
တရားဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာဘင်ဂျမင်ခင်ကိတ်ဂရိတ်ဖစ်မှ ( ဒေါက်တာဂျွန်အာရိုက် ၁၇၂၅-၁၈၀၇) ဂျွန်နယူတန် သီကုံးသော “အံ့ဖွယ်ကျေးဇူးတော်” ဟူသော ဓမ္မသီချင်းကို ကျူးဧပေးပါသည်။
“ကောင်းကင်ဘုံမှ ပေးတော်မမူလျှင် လူသည်ဘယ်အရာကိုမျှ မခံနိုင်ရာ” (ယော ၃း၂၇)
၁။	ပထယမç ကယ်တင်ခြင်းသို့မရောက်စေခြင်းငှာ မာရ်နတ်သည် သင့်နှလုံးသားထဲက တရားစကားကို နုတ်ယူသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ (ရှင်လုကာ ၈း၁၂)
၂။	ဒုတိယç သင်၏သေကြေပျက်စီးသွားသော အတွင်းနှလုံးသားက တရားစကားကို နုတ်ယူသောကြောင့် ဖြစ်သည်။(ရှင်ယောဟန် ၆း၄၄) (ဧဖက် ၂း၅)
၃။	တတိယç သင်၏သေကြေပျက်စီးသွားသော အတွင်းနှလုံးသားက တရားစကားကို နုတ်ယူသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ (ရှင်ယောဟန် ၆း၄၄) (ဧဖက် ၂း၅)
၄။	စတုတ္ထ၊ သင်၏သေကြေပျက်စီးသွားသော နှလုံးသားပကတိက ယေရှုခရစ်တော်ကို ငြင်းဆန်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ (၁ကော ၂း၁၄)